Zoom Wine Tasting 1 - Cellar Door Distribution
Zoom Wine Tasting 1
home / news & events / Zoom Wine Tasting 1
ဝိုင်ချစ်သူတို့ရေ အခုလာမယ့် အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်၊ သောကြာနေ့ ည ၇း၀၀ နာရီမှာ Cellar Door Distribution ရဲ့
ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကောင်းလေးတစ်ခု ရှိလို့နေပါတယ်။ 👏👏👏 ဘယ်လိုအစီအစဉ်လဲဆိုရင်….. ဝိုင်ချစ်သူတို့နဲ့အတူ Cellar Door Distribution မှ ဝိုင်ပညာရှင် Mr.Gavin Davis က Zoom Chatting နဲ့ နာမည်ကျော် ဝိုင်အမျိုးအစားများကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် မြည်းစမ်းရင်း ဝိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သိကောင်းစရာအကြောင်းအရာများကို Sharing လုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့အတွက် တစ်ဦးလျှင် ၆၀,၀၀၀ ကျပ်သာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (တကယ်ကို တန်ပြီး အခုလို Stay Home ကာလ အတွက်တော့ အကောင်းဆုံး အစီအစဉ်တစ်ခုနော်)။ ဒါဆို Package မှာ ဘာတွေပါဝင်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် 👇 👇 👇1 x Welcome sparkling wine (NEDERBURG PREMIERE CUVEE BRUT SPARKLING WINE) 1 x white wine (GORGHI TONDI GRILLO SICILIA IGP WHITE ORGANIC WINE) 1 x Red wine (CASILLERO DEL DIABLO CABERNET SAUVIGNON RED WINE) 1 x Tasting glass (CHEF&SOMMELIER WINE GLASS) 1 x Wine Opener 1 x Food & Wine pairing guide 1 x Systematic Approach to Tasting Wine sheet 1 x Virtual guided tasting (via Zoom) with Sommelier Gavin Davis သတိပြုရမှာတစ်ခုက – wine tasting မစခင်မှာ Sparkling Wine နဲ့ White Wine တွေကို အေးအောင်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ Package မှာပါဝင်မယ့် ဝိုင်ပုလင်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ (၈) ရက်နေ့အထိ၊ မနက် (၈း၀၀) နာရီမှ ညနေ (၄း၀၀) နာရီအတွင်း လူကြီးမင်းတို့အိမ်အရောက် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုစနစ်နဲ့ ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်မယ့်သူများကို email ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ Facebook Page Messenger (သို့) Viber မှတဆင့် Zoom Chatting ကို Join လို့ရမယ့် Zoom Code Number ကို ပို့ပေးသွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် Stay Home ကာလမှာ အိမ်ထဲမှာနေရမယ့် အတူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဝိုင်သုံးဆောင်ရင်း
အစီအစဉ်ကို ဆင်နွှဲလိုက်ရအောင်… အားလုံးပဲ Cheers 🥂
with Sommelier Gavin Davis 👏👏👏 Join AIS (Italian Sommelier Association) foravirtual guided tasting of World wine, TGIF Friday (9.10.2020) night at7pm, for you to enjoy from the comfort of your own home. Afterawelcome sparkling wine & introduction to the history of wine, Sommelier Gavin Davis will take you through wine making process, brand specific history & tasting details. Package includes;1 x Welcome sparkling wine (NEDERBURG PREMIERE CUVEE BRUT SPARKLING WINE) 1 x white wine (GORGHI TONDI GRILLO SICILIA IGP WHITE ORGANIC WINE) 1 x Red wine (CASILLERO DEL DIABLO CABERNET SAUVIGNON RED WINE) 1 x Tasting glass (CHEF&SOMMELIER WINE GLASS) 1 x Wine Opener 1 x Food & Wine pairing guide 1 x Systematic Approach to Tasting Wine sheet 1 x Virtual guided tasting (via Zoom) with Sommelier Gavin Davis Noted: :Don’t forget to chill sparkling and white wine before wine tasting All packages will be delivered between on October 1st to 8th October at 8 AM –4PM. and the ZOOM code will be sent to you via email, FB messenger or Viber.
Vitural Wine Tasting
– 60,000 Kyats per pax (inclusive of tax and delivery fees) to be paid in cash on delivery. So for this stay at home period, Lets enjoy the
program with us. Cheers 🥂🥂🥂
Copyright ©2021 By CellarDoor Distribution | Designed by MTG